Meeshaa buusuu fi fe'uuf warreen gatii humnaa ol gaaftan irratti tarkaanfii fudhatamuufi jedhame - ETHIOPIANS TODAY
Meeshaa buusuu fi fe’uuf warreen gatii humnaa ol gaaftan irratti tarkaanfii fudhatamuufi jedhame.
Meeshaa buusuu fi fe’uuf warreen gatii humnaa olkaffalchiisan irratti tarkaanfii akka fudhatu Komiishinniin Poolisii Finfinnee beeksiseera.
Meeshaa buusuu fi fe’uuf warreen gatii humnaa olkaffalchiisan qorannoon adda baasee tarkaanfii akka irratti fudhatu komiishinichi himeera.
Komiishinii Poolisii Finfinneetti Itti gaafatamaan Dhimmoota Kominikeeshinii Komaadar Faasikaa Faantaa mi’a buusuu fi fe’uudhaaf Birriin kaffalamu waliigaltee abbaa qabeenyaa fi warra buusanii fi fe’aniin malee qaamni buusuu fi fe’u qofaan kan murtaa’u miti jedhan.
Abbaan meeshaa yoo barbaade mi’asaa ofiisaa fe’achuu fi buufachuuf mirga guutuu qabaa jedhan Komaadar Faasikaan.
Mirga fe’uu fi buusuu abbaa qabeenyaa kan dhorku akkasumas gatii humanaa ol warri kaffalchiisan dhimmisaanii qulqullaa’ee seeraan kan gaafataman ta’uus eeraniiru.
Kanaan duras Kutaa Bulchiinsa Boolee Aanaa 9 ,10, fi 12 Gooroo,Bulbulaa,fi Naannoo Samiititti akkasumas Aqaaqii Qaallittii naannoo Koyyee Faccee fi Naannoo Buufata Konkolaataatti hojii buusuu fi fe’uudhaaf waldaan gurmaa’anii 170 ta’an ofii mana taa’anii namoota kanneen biroo qacaruun hawaasarratti yakka garaa garaa raawwatan irratti tarkaanfiin seeraa fudhatamuusaa yaadachisaaniiru.
Fifteen members of a terrorist group have been arrested in connection with a trying terrorist attack on the UAE embassy